စက်ရုပ် Shell ကပျော်စေ China Manufacturers & Suppliers & Factory
စက်ရုပ် Shell ကပျော်စေ - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း စက်ရုပ် Shell ကပျော်စေ ထုတ်ကုန်များ)
ဖုန်မှုန့်စားစက်ရုပ်အစိတ်အပိုင်းများ Injection ကိုတန်ဆာ
မြေမှုန့် - စက်ရုပ်ခရုခွံ, မြေမှုန့်စုပ်ယူ - စုတ်ယူခြင်းစက်ရုပ်နှင့်သိမ်းကျုံးစက်ရုပ် - စုပ်ယူစက်ရုပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု, ပြီးသားလူ့မိသားစု၌ထငျရှားစက်ရုပ်လူတွေဟာမြေမှုန့်ဖို့ ပို. ပို. လက်ခံကြသည်။ နည်းပညာအပြင်, ဖုန်စုပ်စက်၏ထုတ်လုပ်မှုလည်းအရေးကြီးပါသည်။ ကြောင့်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းစက်ရုပ်၏အထူးငှါ, သန့်ရှင်းရေးစက်ရုပ်...
ပေါင်းစပ် Shell က Injection ကိုမှို
မြင့်မားသော Precision ပေါင်းစပ်ရှဲလ် ကို ABS သို့မဟုတ် PC ပစ္စည်းကို အသုံးပြု. ကိုပုံသွင်းထိုးသွင်းနိုင်ပါသည်။ ကို ABS PC ကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အပူတည်ငြိမ်မှုရှိပြီးလွယ်ကူသောအပြောင်းအလဲနဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်။ စသည်တို့ကိုကွန်ပျူတာနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစက် House, လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ,...
တယ်လီဖုန်းဖြစ်ရပ်မှန်များအတွက်ပလပ်စတစ် Injection ကိုမှို ဖြစ်စဉ်ကိုတစ်အပူစည်နှင့်အတူဆေးထိုးစက်အတွင်းပိုင်းစေးလုံးလေးများအရည်ပျော်။ တစ်ခုလွန်ရှေ့ဆက်ပလပ်စတစ်လှုံ့ဆျောနှင့်အရည်ပျော်ပလပ်စတစ်တစ်ခုပင်ရောနှောသေချာ။ စက်ထို့နောက်သတ္တုမှိုထဲကိုအရည်ပျော်ပလပ်စတစ်မောင်း။...
ကို ABS များအတွက်မရေမတွက်နိုင်သော application များရှိပါသည်။ အများဆုံးကျယ်ပြန့်သက်သေပြများထဲတွင်လည်းအချို့ကားကိုစိတျအပိုငျးမြားအပါအဝငျကို PC + ကို ABS နှင့် Lego မှကစားစရာတစ်ခုရောစပ်သောမြို့ရိုးကိုခြေစွပ်အပေါ်တစ်ဦးကကွန်ပျူတာကီးဘုတ်ပေါ်မှာသော့, ပါဝါ-tool ကိုအိုးအိမ်, ပလတ်စတစ်မျက်နှာ-ကိုယ်ရံတော်ဖြစ်ကြသည်။ PC ကွန်ပျူတာ +...
သိမ်းကျုံးစက်ရုပ်၏ shell အရိုးစု
တရုတ်တစ်ဦးကျော်ကြားစက်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူများကထုတ်လုပ်သိမ်းကျုံးစက်ရုပ် shell ကို၏ဘမ် Acrylonitrile Butadiene Styrene ပလတ်စတစ်ကနေဖန်ဆင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအစှမျးသတ်တိ, ဓာတုတည်ငြိမ်မှု, ကောင်းသောလျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိ, မြင့်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခုခံမြင့်မားအပူခုခံ, မီးလျှံနှောင့်နှေး,...
အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များအတွက် shell ထုတ်ကုန်
အခမဲ့မှုတ်လိမ်းပလပ်စတစ်၏ကောင်းကျိုးများ စူပါတောက်ပြောင်: စူပါမွငျ့မားတောက်ပြောင်အထူးကုန်ကြမ်းများနှင့်အရန် အသုံးပြု. အောင်မြင်နေသည်။ ဓာတုခံနိုင်ရည်အရည်: အထူးဓာတုပစ္စည်းပစ္စည်းများများ၏ဓာတုခုခံတိုးတက်လာဖို့အသုံးပြုကြသည်။ အစိမ်းရောင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး:...
မော်တော်ယာဉ် Airbag Shell ကကုန်ထုတ်လုပ်မှု
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Airbag passive ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစနစ်၏တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာထိုင်ခုံခါးပတ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာခရီးသည်များအတွက်ထိရောက်သော Anti-တိုက်မှုကာကွယ်မှုပေးနိုင်ပါသည်။ Airbag shell ကိုမှိုထုတ်လုပ်ခြင်း, အမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံတွေအတွက် Airbag...
လွှဲ shell ကို၏မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု
မော်တော်ယာဉ်လမ်းညွှန်အဖုံးနှင့် Airflow လမ်းညွှန်အဖုံးမော်တော်ကားအသွင်အပြင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းပိုင်နှင့်လေခွင်းဒီဇိုင်းကိုမော်တော်ယာဉ်၏အလွှဲအဘို့အသုံးပြုကြသည်။ ပိုမိုမြန်ဆန်အမြန်နှုန်းနှင့်ပိုမြန်မောင်းနှင်မှုနှင့်အတူ high-performance ကိုမော်တော်ယာဉ်များစေရန်အလို့ငှာခုနှစ်,...
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ Injection ကိုတန်ဆာ shell
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများမြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်မြင့်မားသောဖိအား၏အခြေအနေအောက်တွင်, ဖောက်သည်များမှိုလိုအပျကွောငျးထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းကောင်းသောဆန့, flexural နှင့် compression အစှမျးသတ်တိကိုရှေးခယျြနှင့် polyvinyl chloride တို့ (PVC) ပစ္စည်းကိုခံနိုင်ရည်စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်ဖို့အင်ဂျင်နီယာများအသုံးပြုပုံ Injection ကိုတန်ဆာ, ပရင်တာ...
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အလင်း shell ကိုဆေးထိုးတန်ဆာ
ထုပ်ပိုး: အကာအကွယ်အမြှုပ်တွေနဲ့ woden သေတ္တာများ
နှစ်ဆယ်ပထမဦးဆုံးရာစုမှာတော့စက်ပစ္စည်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလမ်းကြောင်းသစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပေါ့ပါးဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်၏လယ်ပြင်တွင်, က, ဥပမာအားဖြင့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အလင်း shell ကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အလင်း shell...
အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ရေခဲသေတ္တာ, လေအေးပေးစက်နှင့်ရှင်းလင်းသူများအဖြစ်အိမ်ထောင်စုကရိယာများ shell ကိုဆေးထိုးထုတ်လုပ်မှုမတိုင်မီထုတ်လုပ်ထားရမည်, မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု Shell ။ ပိုပြီးလုံခြုံစိတ်ချစွာလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကိုအသုံးနှင့်အသုံးပြုမှုအတွေ့အကြုံအားတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာ, shell...
ရှင်းလင်းသူများ shell ကို, ရှင်းလင်းသူများ shell ကိုပလပ်စတစ်တန်ဆာ, ထုတ်လုပ်ခြင်း, လှည်းစက် shell ကို။ စက်ရုပ်လူ့မိသားစုထင်ရှားခဲ့ပြီးနဲ့လူပိုစက်ရုပ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုပိုမိုလက်ခံကြသည်။ နည်းပညာအပြင်သိမ်းကျုံးစက်ရုပ်များထုတ်လုပ်မှုတွင်လည်းအရေးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သိမ်းကျုံးစက်ရုပ်များ၏အထူးသ၏, shell...
မဂ္ဂနီစီယမ်, ခိုင်မာသောနှင့်ကို ABS အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်မှဆွေမျိုးပိုကောင်းအပူလွန်ကျူး, မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်း Semi-အစိုင်အခဲသေ-casting ထုတ်ကုန်များတွင်ပိုမိုမြင့်မားအရည်အသွေးပိုမိုပေါ့ပါးလွိုင်း Shell က Laptop ကို, မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းရှဲလ်, မဂ္ဂနီဆီယမ်လူမီနီယံအလွိုင်းမှတ်စုစာအုပ်တစ်တန်းပေါ်ဖြစ်ဟန်, သဏ္ဌာန်ထံမှရှိမရှိ ,...
ညီလာခံမိုက္ကရိုဖုန်း Shell ကကုန်ထုတ်လုပ်မှု
ညီလာခံ omnidirectional မိုက်ကရိုဖုန်း, ထိုကွန်ဖရမိုက်ခရိုဖုန်း shell ကိုချမှတ်ခြင်း, audio device ကိုခရုခွံ, ဒီထုတ်ကုန်ညီလာခံ omnidirectional မိုက်ခရိုဖုန်းတစ်ခုခရီးဆောင်ညီလာခံတယ်လီဖုန်းထုတ်ကုန်, ကွန်ပျူတာ၏ interface ကိုတဆင့်အင်တာနက်ပေါ်မှာအရည်အသွေးမြင့်ကွန်ရက်ကတယ်လီဖုန်းအစည်းအဝေးဖြစ်ပြီး, တစ်ဦးကိုလက်နှင့်လွတ်...
ညီလာခံမိုက်ခရိုဖုန်း shell ကိုချမှတ်ခြင်း
မိုက်ခရိုဖုန်း Shell ကထုတ်လုပ်မှု , မိုက်ကရိုဖုန်း Shell ကတစ် shell ကို၏ဆေးထိုးတန်ဆာ, လေ့ shell ကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုများတွင်အသုံးပြုခက်ခဲတဲ့ thermoplastic ဗဓေလသစ် Polycarbonate (PC ကို) ပစ္စည်း၏အသုံးပြုမှုကိုထုတ်လုပ်မှု။ pc ခိုင်မာတဲ့ thermoplastic ဗဓေလသစ်တစ်မျိုးသည်နှင့်မြင့်မားသောအစှမျးသတ်တိနှငျ့ elastic ကိန်း,...
မော်တော်ယာဉ် Monitor Shell က Injection ကိုမှို
မော်တော်ယာဉ်မော်နီတာ shell ကိုဆေးထိုးတန်ဆာသည်ု့ကပ်ရေး shell ကိုဖြစ်စေလျက်, S ကို uperior အရည်အသွေးမော်နီတာ shel ဌဖြစ်စေလျက်, နှင့်မော်တော်ယာဉ် display ကိုအလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများကိုကပိုင်ဆိုင်သည်။ ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်မော်တော်ယာဉ်စည်းဝေးပွဲကိုအသုံးပြုသည်။...
monitor shell ကိုဆေးထိုးတန်ဆာ
shell ကိုဆေးထိုးတန်ဆာ, Display ရဲ့ shell ကိုထုတ်လုပ်မှုသည်မော်နီတာ shell ကိုဆေးထိုးတန်ဆာစောင့်ကြည့်ခြင်း, အိုင်တီစက်မှုလုပ်ငန်းစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ shell ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းသည်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းသည်တိကျတူရိယာ, မသာဖြစ်ပါသည်။ shell...
အော်တို shell ကိုစိတျအပိုငျးဆေးထိုးတန်ဆာ, Automobile shell ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း, အလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အခြားတိကျစွာထုတ်ကုန်ဆေးထိုးတန်ဆာ, အလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု, နည်းပညာ မှလွဲ. မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများကိုပရိသတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းများအထူးသ၏, မော်တော်ကား shell...
အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန် shell ကိုဆေးထိုးတန်ဆာ
အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန် shell ကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု, မှတ်စုစာအုပ်, Router က, မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နှင့်ဒါမှအားလုံးအပေါ်ခွံရှိသည်။ လုံခြုံမှုနှင့်အတွေ့အကြုံသုံးစွဲဖို့အမိန့်များတွင်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုလျှပ်စစ်လျှပ်ကာနှင့်မြင့်မားသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအကြောင်းကိုအဓိကအားဖြစ်ပါတယ်။ Router က set-top box...
အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန် shell ကို Injection ကိုတန်ဆာ
ထိုကဲ့သို့သောမြင့်သောခိုင်မာသောနှင့်အရည်အသွေးနှင့်အတူဒါပေါ်မှာပရင်တာအမှု, router ကို shell ကိုနှင့်အမျှခက်ခဲ shell ကိုထုတ်လုပ်ခြင်း, ။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်လျှင်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏အထူးသ၏,...
လော်စပီကာ shell ကို၏ injection တန်ဆာ
လော်စပီကာ shell ကို၏ injection တန်ဆာသည်လော်စပီကာ shell ကို၏ဆေးထိုးခြင်း, shell ကို၏ဆေးထိုးဘို့ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပစ္စည်းများ၏ရွေးချယ်ရေးအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ စပီကာရဲ့အသံကအကျိုးသက်ရောက်မှု၏အရည်အသွေး shell ကိုအပေါ်မူတည်ပါသည်။ မြင့်တိကျစွာနှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေး shell...
အရည်အသွေးမြင့်မားလော်စပီကာ shell ကို၏ injection တန်ဆာ
အရည်အသွေးမြင့်လော်စပီကာ shell ကို၏ injection တန်ဆာအသံချဲ့စက်၏ရှဲလ်များအတွက်ပစ္စည်းများ၏ရွေးချယ်ရေးတို့အတွက်အလွန်အရေးပါသည်။ စပီကာရဲ့အသံအဆိုပါအရည်အသွေးမြင့် shell ကိုအပေါ်မူတည်ပါသည်။ အဆိုပါအရည်အသွေးမြင့်လော်စပီကာ shell ကိုစပီကာရဲ့အသံအရည်အသွေးတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ တစ် shell ကို၏ injection...
အဆိုပါ shell ကိုပလပ်စတစ်တန်ဆာ
ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးမှိုစင်ပေါ်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ PVC, ကို ABS အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများထားကြပါတယ်နှင့်အိမ်ထောင်စုလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများထံမှပြင်ပပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပင်အလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများမှနေကြပါတယ်ပေးသောပစ္စည်းကိရိယာများအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။...
စက်ရုပ် Shell ကပျော်စေ
အဆင့်မြင့် Die ကာစ်
မျက်စိ Glass ကိုဘောင်များ
အမြင့် End Process ကိုကုသမှု